लडाइ - Nepali Nepse
१८ चैत्र २०७५, सोमबार २०:५०
उ र म सङ्गै एउटै कार्यालयमा काम गर्छौ । म भन्दा उ एक तह तल्लो स्तरमा थियो तर सधै मैले उस्लाइ आफु भन्दा माथी राखी रहे वा मानौ म उस्लाइ औधी माया गर्थे । कार्य को सिलसिलामा अक्सर उ बाहिर देशबिदेश जानू पर्थ्यो भने म कार्यालय मै हुन्थे । तेसो त उ र म बिच सब कुरा साटासाट भएको थियो । कार्यको बाडफाड देखि मायाको चिनो सम्म । हामीलाई कार्यालय मै खुब अरु साथीसङ्गीहरुले कस्तो मिलेको जोडि भनेर जिस्काउथे । म लजाए झै तिनिहरुलाई गाली पनि गरि दिन्थे तर उ चुपचाप सुनी बस्थ्यो ।
एक्दिन समयमै कार्य नसकेको कारण उसलाई जानीनजानी मैले हकारे को पनि थिए भनौं मैले आफ्नो पदको प्रयोग गरेको थिए । यहि रिसमा उ कम्ती म सङ्ग रिसाको थियो । छोरी मान्छे भए पनि मलाइ फकाउन एकदमै रिस उठथ्यो । यहि बिच काम बाहेक हामी बोल्न नि छोडेका थिएम। कार्यालय कै पिउनको मुख बाट एक्दिन त्यो फलानो सर को त बाहिर चक्कर छ भन्दा रिस ले आँखा नदेखेको पनि हैन ।
मुर्मुराउदै उस्लाइ फोनबाट गाली पनि गरेको थिए , के भो ह तिमिलाइ अब बाहिर बाहिर नि ताक्न थाल्यो ? मेरो प्रश्न नसकिदै उस्ले फ्याट्टै उतर दिइ हाल्यो ~ अ छ नि मेरो २/४ जना बाहिर ।
अनि म खुब हास्थे मलाइ त समय राम्रो सङ्ग दिएको थाहा छैन अरु को बनायो र २/४ वटि ह?? अनि हामी दुबै हास्थेम ।
साथीहरु ले रमाइलो छ है जिन्दगी भन्थ्यो । अर्काको काम गरि खान नि के को रमाइलो र ….म मन मनै सोच्थे । हामी बिच को माया कार्यालयको केही सिमित मान्छे हरु मा मात्रै सिमित थियो ।
उस्को फेरि कार्यलय कै कामले बाहिर जानू पर्ने भएछ । म उदास थिइन किनकी उस्ले बसमा चडे देखि बाटो मा खाजा,खाना खाएको, आफ्नो गन्तव्य मा पुगेको सबै कुरा सुनाउथ्यो । मानौ कि उ म सङ्ग अलिकति पर मात्रै छ भनेर । तर यो पाली समय बिल्कुलै फरक थियो । अरु बेला म हिडेको है भनेर मेरो कार्य कक्ष मै आएर लागे है मिस भन्थ्यो तर यस पाली तेस्तो केही भएन । पिउनलाई कल गरे र सोधे त्यो फलानो कोठाको सर कहाँ जानू भयो भनेर उस्ले उहाँ त हिडि सक्नु भयो उतर दियो । मन मा केही चिसो पसे जस्तै लाग्यो ।
पिउनलाई फेरि एक कप तातो चिया मेरो कोठामा लेराउन लगाए । म उस्को नम्बर डायल गर्छु , व्यस्त आउँछ । पुनः प्रयास गर्छु फेरि पनि व्यस्त नै आउँछ । तेति न जेल पिउनले चिया लेराइ सकेको हुन्छ । पिउनलाई फेरि सोधे फलानो सरले केही भन्नू भएको छ र ?? उस्ले टाउको को इसारा ले छैन को उतर दिन थाल्छ ।
म फेरि मौन बस्छु । टाउको फुटे झै दुख्न थाल्छ, ब्याग बाट दबाइ निकालेर खान्छु । अलि सन्चो भए जस्तो लाग्न थाल्छ र पुन कल गर्छु उस्लाइ , उस्को कल यो पालीमा सम्पर्क हुन सक्दैन । घण्टै प्रयास गर्दा नि लाग्दैन ।
उ बाहिर गएको करिब हप्ता दिन भएको थियो । यो बिचमा हामी बिच एक पटक नि कल, मेसेज केही भएको थिएन । म आफ्नो दैनिक झै कार्यालय मै थिए , पिउन ले कोठामा आएर भन्न थाल्छ मिस फलानो सर आज आइपुग्नु भो रे भोलि बाट काम मा आउनु हुन्छ क्यारे ।
पिउनको कुरा सुन्नासाथ मन हल्का हुन्छ । तुरुन्त उस्लाइ कल लगाउछु, कल लाग्छ – र लगत्तै म भन्छु
_के भो ह तिमिलाइ मलाइ एक कल गर्न नि उचित ठानेनौ है ,
उस्ले सादा जवाफ दिन्छ म बिजि थिए ।
म झन छ्क्क पर्छु र फेरि उस्लाइ प्रश्न तेर्साउछु ,
कस्तो बिजि २ मिनेट कल गर्न नि तिमीसङ्ग अब समय छैन कि हामी बिच को सम्बन्ध के थियो बिर्स्यो तिम्ले ???
मेरो प्रश्नबाट रिसाउदै उस्ले भन्छ, म बिजि थिए तिमिलाइ मान्नु छ मान या नमान तिम्रो मर्जी । उ यति भनेर मेरो कल राख्छ ।
म रिसाउनु पर्ने ठाउमा उल्टै उसैको रिस वाह रे वाह ।।।।
कति अचम्म ….
भोलिपल्टै बिहान म कार्यालय अन्य समय भन्दा छिटै पुग्छु । करिब एक घण्टा पछि कामको बहानामा म उस्को कोठामा पस्छु । उस्को कोठाको ढोकामा म ढ्कढक्याउछु , उ मलाई हेर्छ तर मलाइ बेवास्ता गरे झै गर्छ र मोबाइलमा बिजि हुन थाल्छ , म कोठामा भएको सङ्गैको कुर्सीमा बस्छु र सोध्छु के भयो ह? बोल्दा नि बोल्दैनौ त ।
उ मौन रहन्छ मानौ मेरो कुराले खुबै तनाब दिए झै ।
फेरि म सोध्छु भनन के भयो किन नबोलेको म सङ्ग ~मैले तेस्तो के गरे र ??
यस पट्क भने मैले उस्को हाथ समातेर भनेको थिए तर उस्ले मेरो हाथलाई भुइँमा फ्याके झै लत्याएर आफू कोठाबाट बाहिरिन्छ मानौ म कुनै दोषी हु र मैले सजाय पाउदै छु । उस्को यो व्यव्हार घत लाग्दो थियो । आश्चर्यजनक थियो ।
साच्चै उस्को र मेरो लडाइ भएको थियो । मेरो बोली अनि उस्को मौनताको लडाइ । उ आफ्नो मौनताले जित्न खोज्दै थियो भने म आफ्नो बोली ले । मेरो कयौं प्रयास पश्चात् पनि उस्को मौनता बोलिमा परिणत भएन अन्ततः उस्को मौनता बिजय भयो ।
बधाइ छ तिमिलाइ तिम्रो मौनताले हामीबिच को यो लडाइ जितेको छ ।